भोलि मेरो जन्म दिन हो ‘सुखकाे दिन कहिल्यै आएन’ भन्दै संसार छो’डे – Sanchar Patrika
काठमाडौं । नेपालीहरुले फेसबुक लाइभ गर्दै दे’ह’त्याग गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालीहरुमा देखिएको ‘फेसबुक लाइभ’ दे’ह’त्याग चि’न्ताको विषय बनेको छ । फेसबुक लाइभमा गरिएका यस्ता दे’ह’त्यागका भिडियोले मानिसको मनोबल क’मजोर गराउने र यस्ता ग’लत कामका लागि अरुलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला फेरि एक नेपालीले आफ्नो जन्म दिनकै समयमा फेसबुक लाइभ गर्दै दे’ह’त्याग गरेका छन् ।
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ बेलटार घर भई मलेसियामा बस्दै आएका ५१ वर्षीया व्यक्तिले फेसबुक लाइभ गर्दै जीवन त्या’ग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारको क्रममा २० बर्षदेखि मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा बस्दै आएका हेमराज बिष्टले आफ्नो जन्म दिनको अघिल्लो साँझ ९ः१६ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ गर्दै दे’ह’त्याग गरेका छन् ।
उनले लाइभका क्रममा भनेका छन्, ‘आज म लाइभ आउनुको कारण भोलि मेरो बर्थडे हो । त्यस्तै बा’ध्यताका कारण भोलि मेरो अन्तिम दिन पनि हो । धन सम्पत्ति होस् नहोस् कसैले फुर्ति नगर्दा हुुन्छ । एक दिन जानु जरुरी छ । सम्पत्ति त मसँग पनि कहाँ कम छ र ? दुःख गर्दा सम्पत्ति हुँदो रैछ । मलाइ नपुगेर हैन । कसैसँग झ’गडा भएर पनि हैन । म ५१ बर्षको भएँ । आजका दिनसम्म कहिले सुखका दिन आएन । अनि किन बाच्नु ?’
जन्मदिन मनाउन साउन १८ गते र १ः२५ रातको समय मिलाउदै उनले दे’हत्या’ग गरेको साथीहरुले जानकारी दिएका छन् । उनका श्रीमती र दुई छोरा छन् । जेठा छोरा सिभिल इन्जिनियर हुन् भने कान्छा नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्छन् । उनको श’वलाइ मलेसिया क्वालालम्पुरको एक अस्पतालमा राखिएको छ । आवश्यक प्रक्रियापछि नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको मलेसियामा रहेका उनका आफन्तले बताएका छन्
Prevजीवनकालमा असल मान्छे बन्न के गर्ने त ? जानकारी लिनुहोस :
Nextकञ्चनपुरमा जन्मियो ४ आँखा २ टाउको भएको अदभुत बाच्छी
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो ?